Krita 5.0.6 inosvika chete kugadzirisa akati wandei | Linux Addicts
Krita 5.0.6 inosvika chete kugadzirisa akati wandei
pablinux | 27/04/2022 15:36 | Free Software
Panguva ino pave pasina shanduro jump. Zvichida pachava munguva pfupi iri kutevera, kana chero chezvitoro kwavanoendesa software vakasarudza kuti pane chimwe chinhu chavanoda kuchinja. Asi chii isu tinowanikwa kubva maawa mashoma Krita 5.0.6, shanduro yasvika kuti igadzirise kukanganisa. Izvi hazvisi izvo zvinozivikanwa se "hotfix", ndiko kuti, gadziriso panogadziriswa mabhugi mazhinji.
Krita 5.0.6 yakaburitswa kugadzirisa tsikidzi mbiri chete. Nenguva pfupi yakadaro shanduko, munhu anoshamisika kana imwe update yaidiwa kana zviri nani kumirira nekugadzirisa zvimwe zvinhu, asi boka re dev rakasarudza hongu. Pamwe mamwe mabhugi ainyanya kutsamwisa kana kuratidzwa kupfuura zvaitarisirwa, izvo zvaigona kuguma nebasa rakaoma.
Iwo mabhugi maviri ayo Krita 5.0.6 anogadzirisa
Izvo KDE yakagadzirisa muKrita 5.0.6 ndeye a hang up (kuparara) paunenge uchishanda nevector layers kana vector sarudzo uye kushandisa undo yakawanda uye imwe pakudzima vheji layer ine animated transparency mask. Vagadziri vacho havana kutaura nhasi kana iyi yekutanga vhezheni yasvika kuitira kuti irege kuikwevera mune yakakura update, Krita 5.1.0 iyo yatova mumharadzano yeKDE yekudhirowa vagadziri. Krita 5.0.5 llegó asingasviki mavhiki maviri apfuura, uye yakaita saizvozvo nekugadziridza kwakawanda. Yakauya mushure mekusvetuka mavhezheni maviri, "thanks" kuchitoro chesoftware chakaramba zvikamu zviviri zvisingaite zvainoda.
Krita 5.0.6 ikozvino iripo kubva website yepamutemo yeWindows, macOS uye Linux. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kudhawunirodha AppImage, asiwo wedzera repository yeDebian/Ubuntu. Kune avo vanoda mamwe marudzi emapakeji, inofanirwa kusvika nekukurumidza Flathub y Snapcraft, kunyangwe kana iri snap package ichiri pav4.4.5 uye inogona kutora nguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 5.0.6 inosvika chete kugadzirisa akati wandei
Shortwave 3.0 inosvika iine tweaks kune interface uye yakavanzika zviteshi, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Chrome 101 inosvika ine yekutanga maneja kurodha zvemukati, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva